Masiixiyiintu maxay maalmo kala duwan u ciidaan Kirismas-ka - BBC News Somali
Masiixiyiintu maxay maalmo kala duwan u ciidaan Kirismas-ka
Xalfad ka socota kaniisad Masar ku taal
Daraasad ay samaysay xarunta cilmi baadhista ee Pew sannadkii 2011 ayaa xaqiijisay in tirada dadka Masiixiyiinta ah ee ku nool dunidu ay tahay 2.19 bilyan oo qof waxaana ay maalmahan u dabaal degayaan dhalashadii Nabi Ciise.
In kasta oo sida la ogtahay ay dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo dalalka dunida badankoodu ay Ciidda Kirismas-ka u dabaal degaan 25 Diisember sannad walba, hadana waxa jira wadamo badan oo isla ciiddaa u dabaal dega 7 Jeeniweri sannad walba.
Kala duwanaanshahaa waxa u sal ah kala duwanaanshaha hab tiriska taariikhda.
Dalalka Galbeedka badankoodu waxay adeegsadaan habka Gregorian-ka la yidhaa oo uu dejiyey Pope Gregory sannadkii 1582.
Dalalkii ugu horreeyey dunida ee qaatay hab tiriska Gregorian-ka ee taariikhda na waxa ugu horeeyey Spain, Portugal, France, Poland, Italy iyo Luxemberg.
Jarmalkuna wuxuu qaatay hab tiriskan taariikhda sannadkii 1775, halka Bulgaria ay qaadatay sannadkii 1917.
Farqi 13 maalmoood ah
Laakiin dalalkii ka tirsanaan jiray Soofiyeet-kii hore badankooda, Bariga Dhexe iyo Itoobiya waxay adeegsadaan habka tiriska taariikhda ee Julian-ka la yidhaa oo la dejiyey waagii uu boqortooyadii Roman-ka taladeeda hayey boqor Julius Ceacer sannadkii 45-kii.
Farqiga u dhexeeya labada hab tiris na waxa weeyi 13 maalmood.
Masiixiyiinta Quddus oo ciidaya
Chirtoph Kalin oo ka tirsan baadariyiinta Kaniisadda Orthodox-ka Ruushku ayaa sheegay in "maalinta 25 Diisember ee tirsiga Julian-ku yahay uun isla 7 Jeeniweri ee tirsiga Gregorian-ka".
Dalal ka haysta mad-habta Orthodox-ka qaarkood oo ay ka mid yihiin Greece, Cyprus iyo Romania waxay iyaguna qaateen hab tirsiga Julian-ka sannadkii 1923 oo waxay u dabaal degaan ciidda Kirismas-ka 25 Diisember sannad walba.
Qiyaastii 85% dadka Ruushka ayaa iyaguna ciiddaa u dabaal dega todobada bisha Jeeniweri.
Waxa kale oo Ruushka ay isku taariikh ciidaan Kirismaska dalalka Ukraine, Israel, Masar, Bulgaria, Serbia, Belarus, Montenegro, Kazakhistan, Macedonia, Ethiopia, Eritrea, Georgia iyo Moldova.
Hase yeeshee dalalku taariikhda ay ku kala duwanyihiin ka sokow waxa jira caadooyin ay wadaagaan oo ay ka mid tahay in ciiddaa ka hor dadku ka soomaan hilibka muddo 40 maalmood ah iyo sidoo kale in habeenkaa ciidda aad loo xafladeeyo iyo in guryaha la dhigo alaabo qurux badan.
Xafkadda ciidda oo ka socota kaniisad Ruush-ka ku taal
Caadooyinka waxa ka mid ah in habeenkaa casho gaar ah la sameeyo oo 12 cunto oo kala duwan la kariyo, taas oo u taagan laba iyo tobankii xawaari ee Nabi Ciise u gargaaray.
Laakiin waxa kale oo jira caadooyin u gooni ah dalal gaar ah sida Itoobiya oo kale oo dadku gashadaan dhar cad oo ay ku tagaan kaniisadaha.
Dalka Serbia-na maalinta ka horraysa ciidda ayaa dadku u baxaan kaymaha oo ay laamo ka soo goostaan geed lagu qurxiyo guryaha ama suuqa ayay ka soo iibsdaan.
Muuqaal, DAAWO: Muslimiinta Jakarta oo loogu baaqay inay qof Muslim ah doortaan
Muuqaal, Daawo: Macallin masiixi ah oo qur'aanka bara Muslimiinta
TOOS Sare u kac ku yimid kobaca dhaqaalaha Jabuuti